Iqhwa leqhwa: izici, ukwakheka, izinhlobo nezingozi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | | Ukwahlukanisa
Impela wake wezwa nge Ukwehla kwesithwathwa. Kuyikhithika elinodlame elenzeka kungazelelwe. Ingafaka kokubili ama-substrates nezinto zokwakha njengengxenye yomhlaba oqinile nohlaza. Abantu abaningi abazi kahle ukuthi babhekane kanjani neqhwa leqhwa noma ukuthi livela kanjani.
Ngalesi sizathu, sizonikezela le ndatshana ukukutshela konke odinga ukukwazi mayelana nezici, imvelaphi kanye nesenzo lapho ubhekene neqhwa.
2 Ukwahlukaniswa kweqhwa
3 Ukwakhiwa kweqhwa leqhwa
4 Okufanele ukwenze
Kuyindawo enkulu yeqhwa, ekugcineni ewela ezintabeni ngenxa yokuqongelela kweqhwa. Kuyinto emthambekeni neqhwa ukuthi ndawonye kubangele imvula isisindo iqhwa uqobo. Masingakhohlwa ukuthi amandla adonsela phansi ahlala enza into yawo futhi adonsela lonke iqhwa endaweni yalo ephansi kakhulu.
Izici eziyinhloko zama-avalchi ukugeleza okusheshayo nokushesha kokuhamba. Kungaba ama-avalanches amatshe, udaka, iqhwa neqhwa, njll. Uma sikhuluma ngodaka lwedwala, yiqembu lamatshe asethambekeni okuthi, ngenxa yesimo sezulu somzimba noma samakhemikhali, ligcine liphukile futhi lihlale phansi ngenxa yamandla adonsela phansi.
Kubantu abaningi, lokhu kungenye yezehlakalo zemvelo ezihlaba umxhwele, kepha futhi kuyingozi kakhulu. Abashushuluzi abaningi bangakwazi ukwehla ekwehleni ngejubane elikhulu nangobungcweti. Kodwa-ke, i-avalanche iwa ngokushesha okukhulu.
Uma ubukhulu beqhwa bungazinzi futhi buba semthambekeni, isivinini salo sizokwenyuka njengoba ukuphakama kwehla njengoba kwehla. Umsindo owukhiqizayo mkhulu futhi uzwakala nakwezinye izintaba. Lapho ekugcineni ihlala phansi emthambekeni owehlayo, ikhiqiza inani elikhulu lamafu ezinhlayiya zeqhwa ngenxa yomthelela. Lezi zinhlayiya zeqhwa ekugcineni zihlakazeka emoyeni bese zincibilika.
Ama-avalchi kwenzeka lapho izingqimba ezahlukahlukene zeqhwa zingalingani, okwenza kube lula ukuthi ungqimba olulodwa luhambe noma lushelele ngaphezu kolunye. Ngokuvamile, zihlala zikhona ngenxa yezimbangela ezithile, phakathi kwazo esingagqamisa kuzo: isimo sendawo, umoya, imvula, izinguquko zamazinga okushisa, izimo zeqhwa, ukuma nobukhulu bendawo, uhlaza olukhona kanye nabantu uqobo.
Ngokufanayo, ubunzima besigameko buhlobene eduze nomthambeka, indawo yokwehlukanisa, nezinga lokwehla emthambekeni. Ngokuphathelene nokuhlukaniswa kwabo, ngokuvamile bahlukaniswe izinhlobo ezi-3.
Ukwehla kweqhwa kwakamuva: yilezo ezenzeka ngemuva kweziqephu zokuwa kweqhwa okunamandla nokuphikelela. Zivame ukuqoqa amasentimitha anele eqhwa elisha futhi kubangela ukuthi izinhlayiya ze-crystal crystal zingakabi nesikhathi esanele sokuhlangana ngendlela enamandla nenhlupho. Ngakho-ke, baqala ukuna njengoba ikhava yeqhwa ingazinzile impela.
Plate ukudilika- Kwenzeka ngenxa yokuslayida kongqimba oluhlangene noluminyene. Lokhu kuslayida kwenzeka kolunye ungqimba lweqhwa oludala kakhulu olwenza sengathi kuyirampu ngoba alunabumbano phakathi kobuso bobabili. Imvamisa kwenzeka ngenxa yokugcwala ngokweqile futhi ikakhulukazi emithambekeni esukela kuma-degree angama-25-45.
Ukwehla Kweqhwa Kwe-Meltdown: kuyinto ejwayelekile kunazo zonke eyenzeka minyaka yonke. Zivame kakhulu entwasahlobo futhi kungukufuduswa kwesisindo seqhwa esimanzi esingenakho ukuhlangana. Zingaba kusuka ekugelezeni okuncane kwasendaweni okungabalulekanga kangako kuma-avalchian amakhulu. Akhiqizwa ngenxa yokwanda kwamazinga okushisa ngokuqhubekayo phakathi nentwasahlobo futhi lapho edlula amadigri ayi-0 ungqimba lokuqala luqala ukuncibilika. Izolo ukuncibilika kubangela ukugcwala kwezingqimba ezingezansi bese kuqala ukukhulisa ukungazinzi kwendawo. Ngakho-ke, bagcina bachitheka ngokweqile okuncane. Uma amanzi ancibilikayo efika ezingxenyeni ezingezansi, angakhiqiza ifilimu eshelelayo ebangela ukudilika phansi. Leli banga elingezansi alilutho ngaphandle kwengubo yonke yeqhwa elishibilika.
Ukwakhiwa kweqhwa leqhwa
Isisindo se-avalanche cishe singamathani ayisigidi. Cabanga ukuthi ushushuluza ngomoya ophansi, ujabulela ubuhle nokuhla kwejubane le-adrenaline, bese uzithola ujahwa amathani ayisigidi eqhwa. Umphumela uba mubi. Iningi labashushuluza abathintekayo kulesi sigameko bangcwatshwa kulo.
Ngaphezu kwalokho, ngeke ugcine ngokufa kuphela ngoba ungcwatshwe, kepha futhi kufanele wazi ukuthi izigidi zamathani ziqandisiwe futhi uhlushwa yi-hypothermia. Kodwa yini ebangela ukudilika? Ukuze kwenzeke izehlakalo ezinzima kangaka, kudingeka iqhwa eliningi. Isithwathwa emithambekeni siyimbangela ephelele yokuwa komhlaba.
Imvamisa zakha emithambekeni enama-engeli amade phakathi kwama-degree angama-25 kuye kwangama-60. Kulokhu, lapho iqhwa ligcinwa, lingafakwa amandla adonsela phansi. Kepha ukwakheka kwe-avalanche kudinga esinye isici, okungukuthi, ukuthi kube ne-blizzard engagcina cishe i-30 cm yeqhwa kungqimba olungaphezulu ngesikhathi esifushane. Isithwathwa kufanele sigcinwe okungenani amahora angama-24 ukusivumela ukuthi sixazulule isisindo esikhuphukile ngokuhlangana.
Isibopho esiphakathi kwezendlalelo zeqhwa kufanele sibe buthakathaka kuzo ukuze zingazinzi. Imvamisa, lapho iqhwa ligcwele abantu abaningi, kukhona ungqimba olungazinzile ngokwengeziwe. Ukuguquka kwesimo sezulu kungazelelwe kule ndawo yikhona okubangela ukudilika kwalesi simo. Kungaba futhi yisihlahla esiwisiwe, ukuzamazama komhlaba okuncane, noma umsindo owedlulele, ofana nemakethe noma izipikha.
Ake sibone eminye yemithetho yokufunda ukuthi ungabhekana kanjani neqhwa leqhwa:
Lapho uquqaba luqala ukukhululeka, kungakuhle ukuthi ususe izigxobo ze-ski ngoba zingadala umonakalo omkhulu.
Kufanele uzame ukuphuma endleleni ye-avalanche ngokuhamba kwesikhathi
Uma uwe futhi wahudulwa, zama ukuhlala ebusweni ngazo zonke izindlela unyakazisa izingalo zakho sengathi ubhukuda.
Lapho i-avalanche incipha, kufanele umboze umlomo wakho namakhala ngezandla zakho ukuze wakhe umgodi ovumela ukuthi uphefumule.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeqhwa leqhwa nezimpawu zalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Ukwehla kwesithwathwa